Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Kaadi
Egbugbere ọnụ Gloss kalama
Ileba Anya Anya
Ihe Nleta Foundation
Igbe nkuchi obi Obi na windo
Igbe onyinye Kalịnda Maka Obere ...
Akwụkwọ paịlị na enyo
Igbe onyinye siri ike
• Emere igbe onyinye a nke GB-108 nke kaadiboodu ọcha nke 1000, 110 grams oji nke puru iche. Styledị igbe ahụ bụ igbe octagon.
• logo ọla ọcha na-akpali stamping.
Igbe Ederede Obi
• Ejiri igbe a GB113 Obi ime ihe nke 1000 gram grasia, akwukwo grasia 120 grams maka mkpuchi na 120 grams gold akwukwo di iche maka isi.
• Akara ahụ na-ekpo ọkụ ma na-emebisị ihe niile n'elu mkpuchi.
Igbe Akwụkwụ Obi
• Nke a GB112 igbe mpempe obi bụ nke 1200 grams greyboard, kaadị ojii 120 grams na 120 grams light light yellow paper. Nke mbu, anyi mere ya na kaadi ojii ka ibu ihe eji etinye obi, ma tinyezie odo di na ya.
• Edere ya ederede ederede oji ojii na mkpuchi, ma na-enweghị ihe ọ bụla, ịnwere ike ịgbakwunye akara ngosi dị na ya na ọla ọcha na-ekpo ọkụ ma na-agba ume.
Igbe Semicircle siri ike
• Nke a GB-111 Semicircle Box ka nke kaadiboodu ọcha nke 1200 gram, akwukwo nke omaricha ihe omuma nke ọla edo bu 120 maka ichochi.
• Ihe mpe mpe akwa iji mepee igbe ahụ.
Igbe Ahịhịa Round
• Nke a GB-110 Round Box bụ nke kaadiboodu ọcha gram 1000, akwụkwọ mmado ọla edo 120 grams maka ikpuchi.
• Ọkpụkpụ uhie na eriri ụta na mkpuchi.
Art Paper ịchọ mma igbe
• Nke a GB-109 Box ịchọ mma bụ nke kaadiboodu 1000 grams ọcha, akwụkwọ edemede 157 gram maka ikpuchi.
• Mpempe akwụkwọ agba CMYK, elu ahụ na-eme mkpọchi mgbochi, yana obere ọla ọcha na-acha uhie uhie na mkpuchi.
Nkọwa ngwaahịa: A na-etinye igbe onyinye a GB-106 nke gram 1000 gram, mkpuchi bụ akwụkwọ pụrụ iche na-acha ọcha na isi bụ kaadị edo edo maka ikpuchi. Styledị igbe ahụ bụ igbe akụkụ isii. akara ọla edo na-atọ ụtọ. Dị igbe: mkpuchi na igbe dị n'okpuru. Akụkụ igbe: 220mm * 220mm * 60mm; elu mkpuchi: 25mm N'okpuru okpokoro, ị nwere ike ịhọrọ ihe eji eme ihe, imecha na mbipụta maka igbe nkwakọ ngwaahịa gị. Ihe dị ： GB-106 Ihe ： Art art, akwụkwọ Kraft, mpempe akwụkwọ mkpuchi, kaadiboodu isi awọ, kaadi ọcha & kaadi ọla edo, p…
Nkọwa ngwaahịa: A na-etinye igbe onyinye a GB-107 nke gram 1200 gram, akwụkwọ dị mkpa 120 grams maka ikpuchi. Styledị igbe a jikọtara ya na igbe igbe atọ, mepee ya n'etiti etiti igbe abụọ ma mechie ya. Akara gị nwere ike ịme stamping dị ọkụ na ya .. Mpekere nke igbe: 250mm * 105mm * 54mm N'okpuru tebụl, ị nwere ike ịhọrọ ihe, ịmecha na ibipụta maka igbe nkwakọ ngwaahịa gị. Ihe dị ： GB-107 Ihe ： Art art, akwụkwọ Kraft, mpempe akwụkwọ mkpuchi, kaadiboodu isi awọ, kaadi ọcha & ọla edo, s ...
Nkwakọ ngwaahịa onyinye ndọta
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe onyinye a GB-105 mee 1200 gram greyboard, akwụkwọ mmado 120 grams maka ikpuchi akwụkwọ. The igbe igbe bụ mpịachi igbe, ọ nwere ike kpọkọta ya na ndọta na 4 pcs abụọ n'akụkụ nrapado teepu na akụkụ ọ bụla.it ga-azọpụta ọtụtụ olu mgbe mbupu. akara ọla edo na-atọ ụtọ. Dị igbe: igbe mpempe Mpempe akụkụ nke igbe: nha ewepụghị: 450mm * 100mm; nha igbe t: 157mm * 100mm * 52mm. N'ime okpokoro dị n'okpuru, ị nwere ike ịhọrọ ihe eji eme ihe, imecha na ibipụta maka igbe nkwakọ ngwaahịa gị. ...
Igbe onyinye Chocolate / Swiiti
Mpempe akwụkwọ Mpempe siri ike na igbe onyinye
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe onyinye a GB-103 mee nke 1200 gram greyboard, akwụkwọ art 157 gram maka iji kechie akwụkwọ. Dị igbe ahụ bụ mkpuchi na isi, ya na igbe nke imezi ihe maka mkpuchi mgbe emechiri ya. Edere ya CMYK agba ma na-eme ihe onyonyo na-acha edo edo. Dị igbe: idzọ na igbe dị n'okpuru igbe: 96mm * 96mm * 210mm; mkpuchi mkpuchi: 178mm. N'ime okpokoro dị n'okpuru, ị nwere ike ịhọrọ ihe eji eme ihe, imecha na ibipụta maka igbe nkwakọ ngwaahịa gị. Ihe dị ： GB-103 Ihe ： Art akwụkwọ, Kraft mpempe akwụkwọ, mkpuchi ...
Ihe ndọta onyinye
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe onyinye a GB-102 mee 1300 grams greyboard, 157 grams art art maka ikpuchi akwụkwọ. A na-ejikọ igbe igbe na igbe atọ, mepee ya n'etiti etiti igbe abụọ ma mechie ya. mepere emepe, igbe igbe abụọ kachasị nke ọma site na mpe mpe akwa. Edere ya CMYK agba ma mee V-cutter na greyboard. Akụ nke igbe ahụ bụ ogo 90 ma lee anya n'ụzọ kwụ ọtọ. Akụkụ nke igbe: 160mm * 160mm * 105mm N'okpuru okpokoro, ị nwere ike ịhọrọ ihe ndị ọzọ
Ada:No.15 gongye west Road, Songshan lake Park, Dongguan City, Guangdong Province, China